Fomba hisoratana anarana - Sekolin'ny teny amin'ny fiteny Central, Cambridge
Fenoy ny Fandraisana an-tsoratra an-tserasera ary ny fangatahana dia halefa any amin'ny sekolin'ny OR Mamaky sy mameno ny taratasy ary alefaso amin'ny alàlan'ny mailaka, hafatra, na mitondra azy ho an'ny Biraon'ny Sekoly.
Aloavy ny fametrahana (vakansy sy ny saram-pidirana momba ny herinandro 1 miaraka amin'ny saram-pidirana fampiantranoan-trano) ary ny bokinay no handraisanay ny fandaharana.
Hanamafy ny fianaranao sy ny fandraisanao izahay rehefa mandray ny fangatahanareo ary handefa anao ny taratasy fanekena. Ireo mpianatra tsy avy any ivelany EU dia mila ity taratasy fanamarinana ity mba hahazoana Visa amin'ny UK Visa. Ny fampahalalana fanampiny dia azo jerena ao amin'ny Pejy Visa Information.
Ny fanesorana rehetra dia tsy maintsy voasoratra an-tsoratra.
Raha manafoana tapa-bolana na maromaro alohan'ny hanombohana ny fianarana ianao dia hamerina ny sara rehetra afa-tsy ny fametrahana ny vola.
Raha toa ka manafoana ny roa herinandro mialoha ny dian-tongotra dia hiverina 50% ny saram-panafody rehetra.
Raha toa ka tsy nahomby ny fangatahanao ho an'ny Visa Visa amin'ny UK, dia haverinay ny saram-pitsaboana afa-tsy ny fametrahana ny fandaharam-potoana sy ny fametrahana ny trano, rehefa nahazo ny taratasy fanamarinana ofisialy ofisialin'ny Visa.
Tsy mamerina vola intsony izahay raha manafoana ny fanombohan'ny fampianarana.
Miangavy anao aho 'Hiantsena na haba'
Download ny bokintsika
Jereo ny bokintsika - tsindrio ny download